I-china Polyether polyol LEP-330N abakhiqizi nabaphakeli | Longhua
I-LEP-330N iyi-VOC ephansi, ukusebenza okuphezulu, isisindo esiphakeme se-polyether polyol ngokusebenza kwe-3, isisindo samangqamuzana esingu-5000, esingenayo i-BHT. Umkhiqizo awunuki futhi okuqukethwe kwe-trialdehyde akubonakali. Ingasetshenziswa kabanzi kugwebu lokuqina eliphakeme, ukubumba, isikhumba esizimele, i-CASE neminye imikhakha.
I-OHV (mgKOH / g): 33.5-36.5 Amanzi (wt%): ≤0.05
I-viscosity (mPa • s, 25 ℃): 750-950 PH: 5.0-7.0
Inani le-Acid (mgKOH / g): ≤0.05 Umbala we-APHA: ≤30
I-K + (mg / Kg): ≤3
Ukusatshalaliswa kwesisindo samangqamuzana.
I-VOC ephansi, okuqukethwe kwe-trialdehyde akutholakali
Inani lombala eliphansi
Okuqukethwe umswakama kungaphakathi kwe-200PPM
Ama-polyether polyols yizinto ezisemqoka ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwama-polyurethanes.
I-Polyether Polyols yenziwa ngokuphendula i-organic oxide ne-inatiotor.
Ama-Polyols aqukethe amaqembu e-hydroxyl (OH) asebenzayo asabela ngamaqembu e-isocyanate (NCO) kuma-isocyanate akha ama-polyurethanes.
i-polyurethane ingahlukaniswa nge-foam ethambile, i-foam eqinile kanye ne-CASE izicelo ngokuya ngokusebenza kwama-polyether polyols.
Izinto ze-PU ezinokusebenza okuhlukile zingatholakala ngokuphendula phakathi kwabaqalisi abahlukahlukene kanye ne-olefin polymerization.
Ama-Polyols ngokuvamile angahlukaniswa:
I-Polyether Polyol (PPG),
I-Polymeric Polyol (POP)
I-LEP-330N inikeza amaphesenti aphezulu amaqembu aqeda i-hydroxyl-end, ayinikeze isilinganiso esiphakeme sokuphinda isebenze nama-isocyanates. Ingasetshenziswa namanye ama-diols, ama-triols nama-polymer polyols ukufeza ukuguqulwa okufiselekayo kwezakhiwo zomkhiqizo.
I-LEP-330N ingasetshenziswa kabanzi kugwebu lokuqina, igwebu elibunjiwe. Njengokubumba okuphezulu kokuqina kwezihlalo zezimoto; igwebu lokuqina eliphakeme kumatilasi kasofa; ukuqina okukhulu, amagwebu aphezulu kanye nokubumba ama-insoles; Isikhumba se-PU samasondo wokushayela izimoto, iphaneli yensimbi, usofa, isihlalo njll; CASE insimu yezimboni, njengokumbozwa kwe-polyurethane, ama-sealants, ama-adhesives, ama-elastomers, njll.
I-Asia: China, India, Pakistan, mpumalanga ye-Asia
INyakatho neMelika: Canada, The United States, Mexico
I-Ningizimu Melika: iBrazil, iPeru, iChile, ne-Argentina
Ngokuvamile izimpahla zingakhiqizwa zilungile zingakapheli izinsuku eziyi-10-20 bese zithunyelwa zisuka echwebeni laseChina Main ziye echwebeni lakho elidingekayo lokuya khona. Uma kwenzeka kunezidingo ezikhethekile, siyakujabulela ukusiza.
T / T, L / C konke kuyasekela.
Langaphambilini I-Polyether Polyol LE-310
Olandelayo: I-Polyether Polyol LEP-335D
Ukusetshenziswa KwePolyether Polyol
Umsebenzi wePolyether Polyol
Ukusebenza kwePolyether Polyol